Indlela yokwenza imagazini: amanyathelo okulandelwa kunye nokuyila izixhobo | Abadali be-Intanethi
Ukwenza iphephancwadi kunokubonakala kungumsebenzi olula ukuba unolwazi olwaneleyo lokuyilwa. Kodwa ayingomsebenzi weeyure, kodwa ngumsebenzi onokuthatha iinyanga.
Kule post, sifuna ukuba ixesha lingabi nantoni na, kwaye kungenxa yoko sikulungiselele isikhokelo esincinci kunye namanye amacandelo okanye amanqaku amele athathelwe ingqalelo, xa siyila iphephancwadi ukusuka ekuqaleni. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga noyilo lokuhlela, hlala nathi kwaye ufunde ngakumbi malunga nalo mba odibanisa uyilo lomzobo.
1 Iingcebiso zokugcina engqondweni ngexesha loyilo
1.1 Sebenzisa itemplates
1.1.1 Ukubala amaphepha
1.2 Yila ikhava enomtsalane
2 Ezinye izinto ezibalaseleyo
2.1 Ulwazi loyilo lwegraphic
2.2 Iinkqubo endiza kuzisebenzisa
2.5 Imiba yezobugcisa
3 ukuze akhuthazeke
Iingcebiso zokugcina engqondweni ngexesha loyilo
Ngaphambi kokuba uqalise ukuyila nokuqalisa umsebenzi, kubalulekile ukuqwalasela ungcelele lweengongoma eziya kukhapha iphephancwadi lethu.
Ukuba awukabi yingcali kuyilo lokuhlela kunye noyilo lwephepha, siyakucebisa ukuba usebenzise iitemplates. Izakhelo luhlobo lwezikhokelo oko kuya kukunceda usasaze ngokuchanekileyo lonke ulwazi kunye nazo zonke izinto ofuna ukuzifaka kumaphepha akho (izicatshulwa, imifanekiso, njl.)
Iitemplates kunye namaphepha amakhulu zikunceda ukuba ubale amaphepha ngokuchanekileyo kwaye uqinisekise ukuba zonke izinto zibekwe kumgama ofanayo. Konke okufuneka ukwenze kukukhuphela ithempleyithi, uyivule kwi-Adobe InDesign kwaye uqale ukuhlela, ukubeka imifanekiso kunye nokuncamathisela kwisicatshulwa sakho. Ungasebenzisa kwakhona iitemplates ezizodwa ngokutshintshanisa iifonti okanye ii-swatches zemibala ukwenza inkangeleko ebanzi eyahlukileyo.
Ukwenza itemplate yakho kubalulekile ukuba uye kwi-InDesign. Nje ukuba udale uxwebhu ngobungakanani obuhambelanayo kunye nemida, yiya kwiqela lenjongo Amaphepha (Ifestile > Amaphepha) kwaye nqakraza i icon yephepha eliphambili elibonisiweyo phezulu kwendawo yolawulo.
Ukufaka amanani kwiphepha, yenza isakhelo sombhalo kwiphepha kwaye uye kukhetho Chwetheza > Faka unobumba okhethekileyo > Iibhukhmaki > Inombolo yephepha langoku.
Yenza iiheader, eziqhele ukubekwa ecaleni phezulu okanye ezantsi kwephepha ngalinye, kwaye wenze njalo usebenzisa iSixhobo soHlobo (T). Faka igama lephephancwadi ecaleni kolwandiso kunye negama lenqaku okanye icandelo elikwiphepha elilandelayo kwaye ugqibile.
Yila ikhava enomtsalane
Ukuba ukhe wazibhala malunga namaphephancwadi, uya kuqaphela, ngakumbi kwezo magazini zidumileyo njengeVogue, ukuba zisebenzisa izixhobo ezinomtsalane zegraphic.
Ngale ndlela baqinisekisa ukuba umfundi akonwabeli nje ukuyila kodwa ukwakhumbula neqweqwe, oko kukuthi, basebenzisa uyilo olungalibalekiyo ngemifanekiso, iithowuni neefonti ezinomtsalane.
Kule nto, kuyimfuneko ukuba:
Sebenzisa umfanekiso onomdla okanye umzekeliso oko kunokudala umdla othile kumbukeli. Ukwenza oku, iingcebiso zethu kukusebenzisa imifanekiso eneenqwelomoya ezisondele kakhulu (ekufutshane okanye ekufutshane kakhulu) I-element esondeleyo, inkulu inkalo ebonakalayo eyenziwa kumfundi kwaye ngoko ke umtsalane omkhulu.
Gcina uluhlu olufanelekileyo lweetekisi, kuba oku kubalulekile ukuba uyazi indlela yokwahlula ukuba yintoni isihloko, ilogo, isihlokwana, njl. Ukuze lonke ulwazi oluqikelelwayo lube nengqiqo xa umfundi efunda kwaye ukuhambelana komyalezo akulahleki.
Sebenzisa uninzi lweefonti ezimbini ezahlukeneyo enokuthi idityaniswe ngokwemigaqo yoyilo kwaye inokudityaniswa ngokugqibeleleyo. Sincoma ukuba usebenzise enye yesihloko esiphambili kunye nesinye kwezinye izicatshulwa.
Umxholo mawunomtsalane kwaye ungagxininisi kakhulu kwizinto ezingenamdla. Kule nto, kubalulekile ukuba ngaphambi kokubhala wenze imizobo yangaphambili okanye uyilo olunokwenzeka de ufumane eyokugqibela.
Ezinye izinto ezibalaseleyo
Ulwazi loyilo lwegraphic
Esi sesinye sezona zigaba zibalulekileyo ezibandakanya ukubunjwa kunye nokwakhiwa kolwazi oluya kuvela kumaphepha akho ngoyilo olucingisisiweyo kunye nolwakhiwo olunengqiqo. Lelinye lawona manqanaba athatha elona xesha lide ukufikelela kwimvumelwano kuba kubalulekile ukufikelela ekujoliswe kuko.
Kuluntu esiya kuba nalo, ifomathi, uhlobo lwephepha, njl. Kufuneka sinikeze uyilo olungaguqukiyo noluhambelanayo, kodwa ngaphezu kwayo yonke loo nto ithimba ingqalelo kwaye imema ukuba ifundwe kude kube sekupheleni.
Kweli nqanaba imiba efana nokuchwetheza iyangena eziya kusetyenziswa, ubungakanani, iziqwenga ezahlukeneyo eziya kwenza ulwazi (izihloko, ii-intros, amanqaku aphezulu, iifoto, imifanekiso, iimbono ezigqabhukileyo, njl.njl.), imibala ephambili eya kulawula kwaye iya kuphawula isimbo sabo, imibala yesibini okanye eyenye. , njl.
Iinkqubo endiza kuzisebenzisa
Umyili oza kwenza uyilo lwemagazini yakho, kufuneka enze uyilo olusisiseko okanye uyilo apho imixholo iya kufakwa kamva.
Sincoma ukusebenza njengoko kuchaziwe ngasentla, ukuqala kwisiseko setemplate esiqulethe imilinganiselo yoyilo ekuvunyelwene ngayo ngaphambili. Kule nto kukho isofthiwe yokuhlela eyahlukileyo efana ne-QuarkXPress, i-Adobe InDesign, i-Freehand kunye nezinye ezincedisayo ezinokuthi zisincede ezifana ne-Illustrator, Photoshop okanye iCorelDraw, phakathi kwabanye.
Ngokubanzi, imagazini inokupapashwa kabini ngeveki, ngenyanga, rhoqo ngeenyanga ezimbini okanye ngekota. Kukwakho nabanye abenza iintlelo ezimbini ngonyaka nokuba nye.
Yonke into iya kuxhomekeka kuhlobo lwamaphephancwadi esiwenzayo kunye namaphepha ayo (ukuthengiswa kuluntu, ngokubhaliselwa, njl.) Kwaye ngaphezu kwakho konke ukufumaneka komxholo. Ngokomzekelo, iphephancwadi elihlangeneyo aliyi kuba nenkcazelo eninzi kangako enokupapashwa nyanga nganye.
Kwelinye icala, olunye ushicilelo olunomxholo womdla jikelele okanye osetyenziswayo kwaye oluthengiselwa uluntu, ngokuqinisekileyo luya kukwazi ukuyiqalisa kwimarike rhoqo.
Ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nemilinganiselo yoyilo lwephephancwadi, uthotho lwemibuzo kufuneka iphendulwe ukuchaza iiparamitha zayo kunye nobubanzi bayo kakuhle. Okokuqala, kufuneka sichaze iprofayili yoluntu esifuna ukujolisa kuyo, oko kukuthi, sifuna abe ngubani umfundi wopapasho lwethu.
Ukuba nethagethi ichazwe kakuhle, kuya kuba lula kakhulu kuthi ukuba siqhubeke neprojekthi kwaye sichaze umxholo oza kufakwa, isitayile kwaye, ngaphezu kwayo yonke, indlela yobuhle okanye yoyilo. Ukuhlelela ulutsha iphephancwadi akufani noko kusenzeka kumfundi ophakathi kweminyaka engama-40 nama-60 ubudala.
Eli candelo sisishwankathelo esifutshane sento ebekuxoxwa ngayo ngasentla, ngaphakathi kweli candelo kufuneka uhlalutye kwaye wenze isigqibo malunga nemiba efana nefomathi okanye ubungakanani ukuba iya kuba (A4, A5, ifomathi ekhethekileyo, i-tabloid, njl.), iphepha eliza kusetyenziswa (iintsimbi, i-glossy okanye i-matte, i-varnished, njl.), umbala (umbala ogcweleyo okanye omnyama nomhlophe), kunye nokushicilela (iteknoloji yedijithali okanye ye-offset).
Kwesi sigaba kubalulekile ukuqalisa ukucaca malunga nokuba yeyiphi inkampani yoshicilelo eya kuba noxanduva lokushicilela iphephancwadi.
Umyili uya kuba noxanduva lokuchaza ulwazi oluya kupapashwa kwiphephancwadi. ngokomgca wayo wokuhlela. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba bonke abasebenzi beli sebe babambe amabhunga omhleli, bekhokelwa ngumhleli oyintloko nomlawuli wopapasho, apho baxoxa bachaze imixholo enika umdla kubaphulaphuli phambi kokuba bayichaze.
Yonke impapasho, kungakhathaliseki ukuba i-periodicity yayo, kufuneka isebenze kunye nomhla wokuvala, oko kukuthi, ukubeka usuku apho yonke into igqityiweyo (ukubhala, ukuyila, njl.) kwikhalenda.
Ngokuqhelekileyo, xa kuphawulwa umhla, iinguqu ezithile zithathelwa ingqalelo, ezifana, umzekelo, iintsuku ezifunekayo zokushicilela, ukugqiba, ukuphatha, ukuthumela, njl.
Nalu uluhlu lweemagazini eziza kukukhuthaza.
Yasekwa eFransi ngo-1945, kwaye ineentlelo eziprintiweyo ezingama-44 ehlabathini lonke kunye neeWebhsayithi ezingama-37. Imagazini i-Elle Magazine ligunya kwilizwe lefashoni kwaye ibonelela ngendawo eyongezelelekileyo kubayili, abafuziselayo kunye nabafoti abadumileyo kwihlabathi.
Yeyona magazini yefashoni yabasetyhini inkulu ehlabathini efumaneka kumazwe angama-60 nangeelwimi ezingama-46. E-Spain, ishiye uphawu lwayo kwinkcubeko ethandwayo ukususela ngo-1986. Iiqweqwe zayo ze-iconic kunye nomxholo ziye zabonakala, zinika ubukhosi kwimarike yamazwe ngamazwe.
Eli phephancwadi linemixholo eyahlukahlukeneyo evumela ukuba abantu basetyhini bafumane inkcazelo ngobuhle, impilo, izacholo, ukuvumisa ngeenkwenkwezi, ulonwabo neendaba zamva nje eziphathelele ubomi babantu abadumileyo.
Eli phephancwadi lidibanisa ifashoni kunye nemixholo efana nenyani yabasetyhini. Ugxininiso lwakhe kubomi bezesondo ngenye yeengongoma zakhe ezibalaseleyo, ekubeni iphula imiqobo ye-taboo.
Nangona imixholo yayo esembindini inxulumene nefashoni kunye nobudlelwane, amaphepha ayo aquka iindlela zamva nje zefashoni, ukutya kunye neeresiphi zecocktail, amagqabantshintshi malunga neenwele ezidumileyo kunye nezimbo, kunye nemibono yezipho.
I-Cosmopolitan ijolise ekukhuthazeni abafazi kwaye amaqweqwe abo ahluke kwezinye iimagazini ngokufota kwabo okunesibindi kunye nokuthatha inkanuko. Ipapashwa kumazwe angaphezu kwe-100.
Yimagazini e-1 eSpain kwaye ngoku ilawulwa ngu-Olga Ruíz. I-Telva ivumelanisa neenguqu kuluntu, ukwenzela ukuba iveze imixholo yangoku yefashoni kunye nobuhle, ukwenzela ukuba ihlangabezane neemfuno zoluntu lwabasetyhini.
I-Telva igubungela zonke iifashoni zamazwe ngamazwe kunye nobuhle kwaye ube sisithethi sabayili beSpanish, iimodeli kunye nosaziwayo.
Ezi ibe zezona ngcebiso zilungileyo esinokuzicebisa. Ngoku lixesha lokuba uqhagamshelane noyilo lwakho kwaye ugxile kulo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » indlela yokwenza iphephancwadi
Imizobo ye-3D yabaqalayo